China Ji achọ mgbidi nko maka igodo na-emepụta na suppliers | Shengrui
Ji achọ mgbidi nko maka igodo
Ihe eji emepụta ihe eji achọ mma bụ “HLỌ SWLỌ SWLỌ ”LỌ ”LỌ” ihe nrịgo mgbidi. Nhọrọ ụlọ dị ụtọ.
Design: Original imewe "OMLỌ ELỌ ELỌ ”LỌ" mgbidi nko imewe .Ejiji na mara mma. Nhọrọ ụlọ dị ụtọ.
Mkpịsị ugodi dabara adaba ma rụọ ọrụ: Akara mara mma, nke ojii, ụlọ ndị a na ndị ji ụgbọ ala nwere ike ịdakwasị ebe ọ bụla ịchọrọ idobe igodo gị ka ịhazi. Nke a mara mma“ỤLỌ ỌMARỊCHA ỤLỌ” Ihe nkpuchi isi ihe eji ejide nko mmadu iri eji eji edobe igodo, ekweisi, ma obu ihe nke aka.
Nchekwa nchekwa: Debe ụlọ mmiri na ọnụ ụzọ dị ọcha ma dozie ụlọ ọrụ a. Ọ dị mma maka ijide igodo, leashes anụ ụlọ, okpu, nche anwụ, ngwa na ihe ndị ọzọ. Nhazi oge a nke onye nhazi a ga-emeju ụlọ gị ma mee ka ụlọ gị dị ụtọ.
Arịọnụ ngwaike gụnyere: Onye ọ bụla isi njide maka mgbidi, kichin, ma ọ bụ ime ụlọ n'ọnụ ụzọ na-abịa na kposara na plọg mee arịọnụ ya ngwa ngwa na mfe.
Ogo: Emere site na ihe eji eme ihe nchara nchara na-enye ogologo oge, ọrụ, na ike. Dị ike nke ukwuu, nke siri ike, yana nkọwa zuru oke. 100% nyocha dị mma tupu mbufe.
Onyinye onyinye ụlọ mara mma: Ọ dị mma maka ndị lụrụ ọhụrụ, ndị di na nwunye ọhụrụ, ndị enyi na ezinụlọ, ndị a na-enye ọmarịcha onyinye maka onye ọ bụla nwere nnukwu ezinụlọ ma ọ bụ ọtụtụ ụgbọ ala.
Size dị: 11.8 ”L, ma ọ bụ ahaziri ya.
Imecha: Inogide ntụ ntụ ntekwasa na nwa na-acha ọcha na agba.
A na-ejikarị ya: Jide igodo, mkpuchi, akpa wdg .Ọ bụghị naanị nko nko, yana mgbidi mma.
Nke gara aga: Okpukpo mgbidi Islam
Osote: Ji achọ Deer Metal kandụl njide
Osisi nke ndụ Metal bookends
Okpukpo mgbidi Islam
Islam mgbidi mgbidi elekere